Dhageyso: Abuu Cadnaan Oo Sheegtay in Dekadda Hobyo Ay Ka Difaacayso Dowladda itoobiya.
Wednesday July 04, 2018 - 11:11:28 in Wararka by Super Admin
War rasmi ah oo kasoo baxay Xarakada Al Shabaab ayaa lagu sheegay in ciidamadeedu ay joojiyeen dhismaha waddo isku xiri laheyd magaalada Hobyo iyo dalka Itoobiya oo laga dhisayay deegaaanno katirsan gobolka Mudug.
Sheekh C/qaadir Abuu Cadnaan oo ah Mas'uulka Al Shabaab ugu magacaaban Gobolka Mudug ayaa xaqiijiyay in ay ka war heleen qorshe dowladda Itoobiya ay ku dhisaysay waddo jid cadda ah oo isku xiri laheyd magaalada Hobyo iyo dhulka Soomaaligalbeed ee Itoobiya gummeysato.
Wuxuu sheegay in Heshiiskii Farmaajo uu Itoobiya ku siiyay Afar Dekadood ay kamid aheyd dekadda magaalada Hobyo.
"Hobyo waxay ka mid tahay Afarta Dekadood ee a Murtad Farmaajo uu ka iibsaday Xabashida Itoobiya arrinkaasna waa caddeymo aan heynaa" ayuu yiri Sheekh C/qaadir Abuu Cadnaani.
Mas'uulkan ayaa faah faahin dheeri ah ka bixiyay qaabka ay u bilaabatay dhismaha wadada iyo marxaladihii ay soo martay wuxuu sheegay in dhismaha wadada uu soo bilaawday kadib safar uu bilo ka hor Farmaajo ku tegay magaalada Hobyo.
Wadada oo ka timaad Itoobiya waxay soo martaa duleedka degmada goldogob deegaan lagu magacaabo galcase illaa iyo tuulada baxdo ujeedka laga leeyahay ayaa ah in lamarsiiyo badeecadaha Itoobiyaanku kala degayaan dekadda Hobyo.
Al Shabaab waxay ku goodisay in ay is hortaagi doonto qorshaha gurrucan ee Itoobiya ku doonayso in ay kula wareegto dekadda macmalka ee magaalada Hobyo.
Halkan ka degso wareysiga waaliga ama hoos ka dhageyso.